Samsung dia afaka nandefa telefaona misy fakan-tsary efatra | Androidsis
Hanangana telefaona misy fakan-tsary efatra ve i Samsung?
Ny Huawei P20 Pro dia niteraka savorovoro amin'ny famelabelarany dia misaotra ny fakantsary triple aoriana. Nanjary maodely fanovozan-kevitra amin'ny sehatra avo lenta izy io, ary zavatra tadiavin'ny marika hafa hanahaka azy. Ny LG V40 no ho avy manaraka hanana fakantsary telo, ary marika hafa koa miasa amin'ity lafiny ity. Samsung koa, na dia misy aza ny tsaho farany, mandeha lavitra kokoa ny orinasa koreana.
Satria voalaza fa Samsung dia miasa amin'ny telefaona izay mety hanana fakan-tsary efatra any aoriana. Ka tsy isalasalana fa ho lasa fitaovana manome zavatra betsaka horesahina izy io. Ary koa, ny fandefasana azy dia toa tsy dia lavitra loatra.
Misy tsaho sasany fa Ity fitaovana avy amin'ny orinasa koreana ity dia ho tonga alohan'ny faran'ity taona ity. Ka ao anatin'ny telo volana ho avy sisa amin'ny taona 2018 dia tokony hidona amin'ny magazay ity telefaona Samsung ity. Efa ho lany ny fotoana.
Ny tsy fantatra dia ny fari-telefaona an'ity modely ity. Tsy ho avo lenta izy io, satria ny modely rehetra amin'ity sehatra ity dia efa natolotra. Mety ho ny Samsung Galaxy A9 (2019), izay efa nanamarihana teo aloha fa hanana fakantsary telo izy io.
Saingy, araka ny nandrasana, mbola tsy manana angon-drakitra mivaingana momba an'io izahay. Tsaho miely haingana be ao anatin'ny ora farany. Saingy tsy nilaza izany ny orinasa, na koa efa navoakan'ny tsipiriany momba ity finday Samsung ity.
Ny mazava dia hanome lakolosy eny an-tsena ny orinasa koreana ary hiteraka fiheverana betsaka amin'ity fitaovana ity. Ho hitantsika raha marina izany tsaho izany amin'ny farany, na raha tsotra fotsiny i Samsung dia hanolotra telefaona misy fakantsary efatra, roa eo aloha ary roa aoriana. Inona araka ny eritreritrao no hitranga amin'ity maodely ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Hanangana telefaona misy fakan-tsary efatra ve i Samsung?
Nandefa ny Android 9.0 Pie open beta voalohany ho an'ny OnePlus 6